International Space Station inogadzirira kugamuchira komputa huru | Linux Vakapindwa muropa
La ISS kana International Space Station parizvino inogara vatatu vekuAmerican, vaviri maRussia uye muItaly, yakarongerwa kugamuchira komputa yayo yekutanga muvhiki inotevera. HPE (Hewlett Packard Enterprise) yakapihwa basa rekugadzira komputa huru, yekutanga kuvhurwa munzvimbo. Ichavhura paSpaceX Dragon neMuvhuro sechikamu chekuyedza kwekubatana neNASA. Uye izvi zvinei chekuita neLinux kana software yemahara? Zvakanaka chokwadi ndechekuti zvakawanda ...
Iyo ISS yaitaridza masisitimu ayo Windows XP kubva kuMicrosoft kuenda kuDebian makore mashoma apfuura, sezvatakazivisa mune chinyorwa pane ino blog. Naizvozvo, isu takasarudza yemahara software yeInternational Space Station uko kwese kuedza kuri kuitiswa zero zero, nezvimwewo, ndiko kuti, yedu chaiyo nzvimbo murabhoritari. Pamusoro pemarobhoti anotarisirwa neLinux masisitimu, nezvimwe. Asi pane chimwe chinhu ...
Ichi chikamu cheyese cheyedzo inovavarira kuona kuti mhando iyi yehunyanzvi ichaita sei kunze uko. HPE yatora nhanho yekutanga nekutakura uku, asi ivo vanozotumira more technology yecomputer kuchiteshi, senge epamberi komputa masystem senge memory komputa, nezvimwe Tichaona kuti iyo Spaceborne komputa munzvimbo yekunze, uye kana ichivimbika kana iine imwe mhando yematambudziko anoshanda mune mamwe mamiriro asiri pasi.
Spaceborne Computer, seyakakosha komputa yeHPE, yakavakirwa paApollo 40 kirasi masisitimu uye Mhanya linux. Ichabatanidzwa mune imwechete imba-yakatonhorera dzimba nekuda kwenzvimbo uye kukwana kwezvakatipoteredza zvekunze nzvimbo. Iko kuyedza kunogara kwegore rimwe, zvakada kufanana nekutora kuenda kuMars, saka pamwe kuri nechinangwa chekutora supercomputer yerudzi urwu kumamishinari anoenda kupuraneti tsvuku, pasina mubvunzo rubatsiro rukuru kudzikisa latency yekutaurirana uye nekuona kupona kwea astronauts. Ramba uchifunga kuti kutaurirana kunotora maminetsi makumi maviri kuenda kubva paNyika kuenda kuMars kana makumi mana kana uchifanira kumirira mhinduro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » International Space Station inogadzirira kugamuchira komputa huru
Nguva dzose AMD Gnu-Linux., Mune anoshanda masystem, «maVirusi haakanganise iyo inomiririra»., Kukwazisa Kudzidza muPachivande Latin American hacklat hack.- aprendeahackear.com